2020 ရဲ့ အကောင်းဆုံးဂိမ်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းမှု: ဂိမ်းတွေဆီ Star-power ယူဆောင်လာခြင်း | Codashop Blog MM
Home Games 2020 ရဲ့ အကော...
2020 ရဲ့ အကောင်းဆုံးဂိမ်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းမှု: ဂိမ်းတွေဆီ Star-power ယူဆောင်လာခြင်း
ဒီနှစ်ကတော့ လတ်တလောအချိန်တွေထဲမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေအများဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ ဒါပေမယ့် မိုဘိုင်းဂိမ်းတွေကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့ အမြဲအတူရှိပေးပြီး အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားရပါးရဆော့နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပါပဲ။ ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ဂိမ်းခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ လိုက်တဲ့ အနုပညာရှင် စူပါစတားတွေနဲ့ တခြားသော ကမ္ဘာကျော်တွေကို သူတို့ရဲ့ Brand Ambassador သံတမန်ဖြစ်ဖို့ အမြဲတစေ ကမ်းလှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် 2020 ခုနှစ်ကို ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အချို့သောအကောင်းဆုံး Collaborations တွေကို တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်!
BlackPink in your area! PUBG စကြာဝဠာထဲကို ကိုရီးယား girl band စူပါစတားဖြစ်တဲ့ BlackPink ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ K-Pop fever တောင် တော်တော်တက်ချင်သွားတယ်။ Blinks တွေအတွက်ကတော့ Lisa, Jennis, Jisoo နဲ့ Rosé တို့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် PUBG Mobile အကောင့်ဖွင့်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ အတူတူ ဂိမ်းဆော့လို့ရတော့ တော်တော် အားရစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ BlackPink ပုံစံနဲ့ event ဟာ ဒီပူးပေါင်းမှုကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တယ် Game ထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းမှာတင် သူတို့အဖွဲ့ရဲနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ The Album ထဲက တီးလုံးတွေလာနေတာတွေ၊ plane နဲ့ airdrop ကလည်းဒီလက်တွဲမှုကြောင့် လုံးဝ ပန်းရောင်၊ the Killer Cadet Set နဲ့ Adorable Panda Suit လို permanent ဖြစ်တဲ့ အကျီအဝတ်အစားတွေကိုလည်း အမိအရ ယူလို့ရခဲ့ပါတယ်။ ကစားသူတွေအတွက်လည်း game ထဲက mission တွေပြီးအောင်ဆော့နိုင်တာနဲ့တင် BlackPink အဖွဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ နောက်ဆုံး album ကိုရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ How you like that?
အခုပဲ PUBG Mobile အတွက်ငွေဖြည့်ပါ
Booyah ကနေ Bella Ciao သို့, Free Fire နဲ့ Money Heist (La Casa de Papel) ရဲ့ လက်တွဲမှု ဟာဆိုရင်လည်း Gamer တွေအတွက် တကယ်ထိုက်တန်တဲ့အဆုံးစွန်ကောင်းမွန်တဲ့ mashup ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ ဘဏ်ဖောက်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ဒရာမာတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါနဲ့အတူ ကစားသူတွေကို ထူးခြားတဲ့ ဆုလာဘ်တွေရရှိနိုင်ဖို့ Plan Bermuda ရဲ့ “ငွေကြေးပုံနှိပ်ခြင်း” အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ မြှင့်တင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ ဂိမ်း mode အသစ်ကတော့ အဖွဲ့တွေဟာ လုယက်မှုကြီးတွေကို အနိုင်ရဖို့ တစ်သင်းနဲ့တစ်သင်း လည်ပင်းညှစ်ရမယ့် အချိန်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုကြီးမားတဲ့ Free Fire Collaboration မှာ တကယ်မိုက်တဲ့ စုဆောင်းမှုကြီးတွေ မပါရင် ဘယ်မိုက်မလဲ! ကစားသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ game characters တွေကို ဒီနာမည်ကြီး Netflix series ရဲ့ အထင်ကရ အနီရောင် တစ်ဆက်တည်းအင်္ကျီ ကိုဆင်ပေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုပဲ Free Fire အတွက်ငွေဖြည့်ပါ
BLADES community အတွက်တော့ တကယ့်ကို ပျော်စရာပါပဲ။ Riot Games ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဒ်ဂိမ်း က ဒီအချိန်ကန့်သတ်ထားတဲ့ event မှာ virtual တီးဝိုင်းအုပ်စုတစ်စု K/DA ကို K/DA ALL OUT Event ကို လွှဲပြောင်းယူပြီးတဲ့အခါမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကစားသူတွေက အထူးသီးသန့် card တွေနဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ animation တွေပါဝင်တဲ့ special spells တွေ၊ အဲဒီ spell တိုင်းမှာ K/DA အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်စီချင်းရဲ့ performance အတိုလေးတွေနဲ့ ထည့်သွင်းထားတာလေးတွေကို ကစားသူတွေက ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ K/DA Event pass ကနေ level အမြင့်ဆုံးထိ ရောက်ရင်လည်း လူတိုင်းအငမ်းမရလိုချင်တဲ့ K/DA Card Backs Signature Edition မှာ K/DA အဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ Card တွေကို unlock လုပ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
League ရဲ့ နာမည်ကြီး girl band ကလည်း Wild Rift မှာ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပွဲဦးထွက် အခွေနာမည်ကတော့ ALL OUT ဖြစ်ပြီး အခွေရဲ့ပုံစံအတိုင်း champion တွေရဲ့ skin line ကိုလည်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Premium ဆုတွေအများကြီးကိုလည်း mission တွေအောင်မြင်ရုံနဲ့တင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်လည်း လုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။ တကယ်ပဲ Wild Rift ဟာ K/DA ကနေ ဝင်ငွေတွေတော်တော်များများ ရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခုပဲ Wild Rift နဲ့ Legends of Runeterra အတွက်ငွေဖြည့်ပါ
ဒီကောင်းမွန်တဲ့လက်တွဲမှုအတွက် Garena ကို လက်ခုပ်ဩဘာထပ်ချီးမြှင့်ဖို့တော့လိုနေပါပြီ။ 2020 နောက်ပိုင်းမှာ Free Fire ဟာ ကမ္ဘာကျော် လက်တွဲမှုတစ်ခုကို အသိပေးကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ အမေရိကန်လူမျိုး အိန္ဒိယမျိုးနွယ်ဖွား DJ နဲ့ Music producer KSHMR နဲ့ လက်တွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပူးပေါင်းမှုဟာ တမူထူးခြားတဲ့ Free Fire roster ဖြစ်တဲ့ in-game character ‘K’ ကို ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်။ Professor လည်းဖြစ် ဂျူဂျစ်ဆု (jiu jitsu) ပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ K ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတော့ ‘Master of All’ လို့နာမည်ပေးထားပြီး EP တွေကို မြန်မြန် ပြန်ပြည့်လာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းပေါ် အဓိကအခြေခံထားပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ DJ နဲ့ လက်တွဲပါတယ်ဆိုမှ သီချင်းအသစ်မရှိလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ဟုတ်တယ်မလား? KSHMR ကလည်း ဒီပူးပေါင်းမှုအတွက် သီးသန့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “One More Round” လို့အမည်ရတဲ့ သီချင်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Moonton ကလည်း 2020 မှာ အထွတ်အထိပ်ရောက်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အင်အားနဲ့ ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံနဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် Manny Pacquiao ကိုသူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်သံတမန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Manny ဟာ MLBB ကို စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ အားကစားတစ်ခုအဖြစ် ကြော်ငြာပေးမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒီ လက်တွဲမှုကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ လက်ဝှ့အကျော်အမော်ရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် ဂိမ်းဟာ character သစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Paquito ကိုမိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုပဲ Mobile Legends အတွက်ငွေဖြည့်ပါ
Garena team ကိုတော့ Free Fire မှာ အလွန်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အမြဲထည့်သွင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် လေးစားပါတယ်။ နှစ်စမှာ Free Fire က ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး mobile battle royale game ၁ခုဖြစ်တဲ့ Ragnarok နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီပူးပေါင်းမှုဟာ classic အကြိုက်ဆုံး hero တွေဖြစ်တဲ့ Assassin Cross, Poring နဲ့ Mr. Smile-Mask တို့ကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ 2020 နှစ်ကုန်ကိုတော့ အပေါ်စီးကနေ ဆင်နွှဲသွားမယ့် နောက်ထပ်ပူးပေါင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံးသမား စူပါစတားနဲ့ Juventus ရဲ့ရှေ့တန်းကစားသမား Cristiano Ronaldo သို့မဟုတ် CR7 ကို Free Fire ရဲ့ character အသစ် ‘Chrono’ အနေနဲ့ လက်တွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါသေးတယ်။
Previous articleICYMI: 2020 မှာ MLBB ဘာဖြစ်သွားလဲ
Next articleOnepay နဲ့ Codashop မှာ Mobile Legends အတွက်စိန်ဝယ်ယူပြီး ၂၀% လျှော့ဈေး ရနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည့်အချက်များ။